मातातीर्थको जग्गाबारे बाबुरामले दिए यस्तो प्रष्टीकरण : मातातीर्थको जग्गा बितरण विधिसम्मत छ | Nepal Ghatana
मातातीर्थको जग्गाबारे बाबुरामले दिए यस्तो प्रष्टीकरण : मातातीर्थको जग्गा बितरण विधिसम्मत छ
प्रकाशित : १४ फाल्गुन २०७६, बुधबार १५:००
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मातातीर्थको जग्गाबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रष्टीकरण दिएका छन् । ३ फागुनमा संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसबारे प्रश्न उठाएपछि भट्टराईले प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।
सभामुखसँग विशेष समय लिएर बोलेका भट्टराईले भने, ‘फागुन ३ गते ममाथि कृपा गरेर प्रधानमन्त्रीले मेरो चर्चा गरिदिनुभयो संसदमा । मातातीर्थ, सतुंगल, इचंगुको जग्गाबारे उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको छ। त्यसबारे प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।’
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणभन्दा मातातीर्थको कुरा फरक भएको उनले प्रष्ट पारे । ललिता निवास र मातातीर्थको जग्गा प्रकरणलाई उनले गुड र गोबरसँग तुलना गरेजस्तै भएको टिप्पणी गरे ।
जग्गा खोसिने भयो भनेर मातातीर्थ, सतुंगल, इचंगु क्षेत्रका जनताको निद्रा बिथोलिएको भट्टराईले सुनाए । भट्टराईका अनुसार नेपाल ट्रस्टको जग्गा व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिएको होइन । उक्त जग्गा महेन्द्रको पालाको फर्मायसी बिर्ता हो, जुन मोहीहरुले कमाएर खाइरहेका थिए । राजा महेन्द्रले २०२६ सालमा आफ्नो हक परित्याग गरी रैकर गरिदिनू भनेर हुकुम जारी गरेका थिए । हुकुमअनुसार जग्गा रैकर गर्ने काम भयो । तर, सबैले दर्ता गर्न पाएनन् र लामो समयसम्म यत्तिकै रह्यो ।
०४६ सालपछि राजाको स्वकीय सचिवालयका मान्छेले कतिपय जग्गा फेरि राजा वीरेन्द्रको नाममा फिर्ता ल्याए । ०६४ सालमा ट्रस्ट ऐन आएपछि जग्गा स्वतः ट्रस्टमा गयो, जबकी त्यो जग्गा रैकर भइसकेको थियो । ट्रस्टमा मोहीहरुले उजुरी गरे । एउटा कमिटी बन्यो र प्रतिवेदन तयार भयो । प्रतिवेदनले मोहीहरुको जग्गा दर्ता गरिदिनु भन्यो ।
सोहीअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट मोहीहरुको जग्गा फिर्ता भएको डा. भट्टराईले प्रष्ट पारे । यस प्रकरणमा राजनीतिक, कानुनी, नैतिक कुनै पनि प्रकारको त्रुटि नभएको जिकिर उनले गरे । गरिमामय संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।